Zoomlion Harvester ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်(စပါး၊ပဲ)
1. Header: thicker auger blades, design telescopic tooth to make sure fluent transportation, and also improve working efficiency. 2. Higher ground clearance, wider and optional track. 3. Updated waterproof supporting wheel, make your machine walking stable. 4. Adjustable guiding grass board in threshing room, together with the adjustable drum size to make of any kind of grain suitable for the harvesting process. 5. Re-threshing drum to make better efficiency. 6. With hydraulic or manual unloading optional. 7. Automatically hydraulic unloading process to improve working efficiency; Rotatable Grain Tank, Easy for Maintenance. 8. Swing cover of water tank (optional) , Human-oriented design. 9. Powerful engine and bigger fuel tank design to improve working efficiency. 10. Automatically reversing device, it is optional to prevent stalk winding and blocking. 11. Adjustable Screen by one Key Control Bolt, more suitable for different kinds of paddy. 12. Hightened unloading auger.
Popular single cylinder diesel engine ကိုစိုက်ပျိုးရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Implement7Plough
working width:750mm, working depth:250mm dia. of disc: 660mm, type seven point mounted. Matched with tractor,it furrows soil when patches rotate,maily applicable for complex land, such as weedy land, heavy soil, farmland with bricks and stones,with high efficiency,good quality work; It&#039;s easy to adjust, simple to use and durable.
အစားအသောက်များတွင် ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် မှိုပါဝင်မှုနှုန်းကို လျှော့ချရန် အတွက် Dryerအခြောက်ခံစက်များ ယနေ့ မြန်မာပြည်ရှိ အစားအသောက်အများစုတွင် မှိုများစွာ ပါဝင်လျှက်ရှိပြီး ၊ ထိုမှိုများသည် ကင်ဆာကိုဖြစ်စေပါသည်။ ထိုသို့မှိုများကိုဖြစ်စေသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ စိုထိုင်းစ များပါဝင်နေ၍ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆန်စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ပဲမျိုးစုံ ၊ ငါးခြောက် စသော အစားအသောက် ထုတ်လုပ်သော နေရာများတွင် နေပူလှမ်းခြင်းထက် Dryer အခြောက်ခံစက် ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် မှိုများကို လုံးဝကင်းစင်စေပါသည်။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် စက်ဖြစ်သည့်အတွက် အရေအသွေး အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ဖြစ်ပါသည်။ (မိမိလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်ရန် Model မျိုးစုံရှိပါသည်။ အဆိုပါ (Circulating Grain Dryer) ပတ်လည်သီးနှံအခြောက်ခံသည့်စက် ဟုခေါ်ပါသည်။ ၄င်းစက်သည် သီးနှံများကို ညီညာနှံ့စပ်စွာ အခြောက်ခံပေးပြီး၊ အရည်အသွေးမြှင့်စပါးကိုထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ သီးနှံများကို အပူချိန်နဲနဲ ဖြင့်လည်း လျင်မြန်စွာအခြောက်ခံနိုင်ပါသည်။ စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည့်အတွက်လဲ အကျိုးအမြတ်နှင့် ဝင်ငွေများများရရှိစေပါသည်။ ဆန်စပါးအတွက် အကောင်းဆုံးအသုံးပြုရွေးချယ်မှုဟုလဲ ဆိုနိုင်ပါသည်။ လောင်စာမသုံးစွဲသည့်အတွက် အခြောက်ခံမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကို အသက်သာဆုံးလျှော့ချပေးပါသည်။ ထူးခြားချက်များ ၁။ အပူချိန် နည်းနည်းဖြင့်အခြောက်ခံသည့် ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးလျင်မြန်စွာအခြောက်ခံနိုင်သည်။ ၂။ ညီညာနှံ့စပ်စွာအခြောက်ခံပြီး၊ အရည်အသွေးမြင့် စပါးများကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ၃။ လုပ်ငန်းသုံးသီးနှံ အခြောက်ခံစက် ဖြစ်သောကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားကာသင့်အတွက်အကျိုးအမြတ်နှင့် ဝင်ငွေ အများဆုံးရရှိစေသည်။ ၄။ သီးနှံအများအပြားအခြောက်ခံသည့်နေရာများ၊ ဆန်စပါးလုပ်ငန်းများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု။ ၅။ လောင်စာမသုံးစွဲသည့်အတွက်အခြောက်ခံမှု ကုန်ကျစရိတ်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။ အခြားသတ်မှတ်ချက်များ ဖြန့်ချိရေး - မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်/ဖြန့်ချိသူ (Golden Thurain Linnလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာနှင့် နည်းပညာကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်) လောင်စာ - ဒီဇယ်ဆီသို့မဟုတ် ရေနံဆီ ဗို့အား - ၃ လိုင်း၊ 220V/ 380V စတင်စက်နှိုးခြင်း - လျှပ်စစ်ဖြင့် စတင်စက်နှိုးခြင်း
အစားအသောက်များတွင် ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် မှိုပါဝင်မှုနှုန်းကို လျှော့ချရန် အတွက် Dryerအခြောက်ခံစက်များ ယနေ့ မြန်မာပြည်ရှိ အစားအသောက်အများစုတွင် မှိုများစွာ ပါဝင်လျှက်ရှိပြီး ၊ ထိုမှိုများသည် ကင်ဆာကိုဖြစ်စေပါသည်။ ထိုသို့မှိုများကိုဖြစ်စေသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ စိုထိုင်းစ များပါဝင်နေ၍ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆန်စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ပဲမျိုးစုံ ၊ ငါးခြောက် စသော အစားအသောက် ထုတ်လုပ်သော နေရာများတွင် နေပူလှမ်းခြင်းထက် Dryer အခြောက်ခံစက် ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် မှိုများကို လုံးဝကင်းစင်စေပါသည်။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် စက်ဖြစ်သည့်အတွက် အရေအသွေး အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ဖြစ်ပါသည်။ (မိမိလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်ရန် Model မျိုးစုံရှိပါသည်။) ထူးခြားချက်များ အထက်ပါ ပတ်လည် သီးနှံအခြောက်ခံသည့်စက် ကိုအနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးစက်များ (FAR 105,120) ဟုလဲ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ၄င်း (FAR) အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးစက်ကို အသုံးပြုပြီးသီးနှံများ အခြောက်ခံခြင်းသည် သဘာဝနေရောင်ခြည်သုံး အခြောက်ခံခြင်းနှင့် ထပ်တူနီးပါးတူညီပါသည်။ အဆိုပါစက်တွင် အပျက်အစီးမရှိသော အစိုဓါတ်တိုင်းတာသည့် ကိရိယာ ပါရှိသောကြောင့် စပါးများမပျက်စီးနိုင်ပါ။ လောင်စာချွေတာပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲမှု နည်းပါသည်။ အခြောက်ခံမှု ကုန်ကျစရိတ်လျှော့နည်းစေသည်။ အရည်အသွေးမြင့် FAR အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးအခြောက်ခံမှုက သီးနှံအရသာကိုပိုမိုကောင်းစေသည်။ တစ်ဦးချင်းသုံးစွဲသူများ နှင့် နေရာအခက်အခဲရှိနေများအတွက် နံပတ်တစ် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်။ Farအနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးစက်များ။ ။အပူဓါတ်သည်သီးနှံများထဲသို့ထွင်းဖောက်ပြီးသီးနှံမျက်နှာပြင်နှင့်အတွင်းပိုင်းကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းခြောက်သွေ့စေနိုင်ပါသည်။ ဤစမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာကိုဂျပန်နိုင်ငံသီးနှံအဆင့်အတန်းအကဲဖြတ်ရေးအသင်းကြီးမှ ထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Far အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးစက်ကိုအသုံးပြုပြီးသီးနှံများအခြောက်ခံခြင်းသည်သဘာဝနေရောင်ခြည်သုံးအခြောက်ခံခြင်းနှင့်ထပ်တူနီးပါးတူညီပါသည်။ အပျက်အစီးမရှိသောအစိုဓါတ်တိုင်းတာသည့် ကိရိယာ ၁။ လျှပ်သို (Capacitance) အစိုဓါတ်တိုင်းတာသည့် ကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက်အစိုဓါတ်ပါဝင်မှုတိုင်းတာရာတွင် စပါးများမပျက်စီးနိုင်ပါ။ ၂။ သီးနှံနမူနာများဆက်တိုက်စီးဆင်းထုတ်လုပ်ပေးသည့်အတွက် အစိုဓါတ် တိုင်းတာရာတွင်တိကျသေချာပါသည်။  PLC ထိန်းချုပ်စနစ် (ရွေးချယ်စရာ) ၁။ PLC/GUIကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသည့် စနစ်ဖြင့်လွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ၂။ ပမာဏအများအပြားဝင်ဆန့်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းသုံးစံချိန်စံညွှန်း။ ၃။ အဝေးထိန်းကိရိယာဖြင့် စက်ကိုအလိုအလျောက် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ လက်ကျန် သန့်ရှင်းရေးစနစ် အခြောက်ခံမှု တစ်ကြိမ်နှင့် တစ်ကြိမ်အကြားစပါးများမကျန်ရှိစေရန် လက်ကျန် သန့်ရှင်းရေးစနစ်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ကျန်စပါးများကိုလွန်ကဲစွာအခြောက်ခံမိခြင်းသို့မဟုတ် မတူညီသောစပါးအမျိုးအစားများရောနှောကုန်ခြင်းတို့ မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အကြမ်းခံသောစက်ဒီဇိုင်း လှည့်ပတ်စီးဆင်းပြီးအခြောက်ခံရာတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် လေမှုတ်စက်ကိုသုံးထားသောစပါးခြွေလှေ့စက် ပါဝင်သောကြောင့် အခြောက်ခံမှုလုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသည်နှင့် အမှိုက်သရိုက်များဖယ်ရှားပေးကာသန့်စင်သောစပါးများထွက်ရှိစေသည်။ သိသာစွာဓါတ်အားမသုံးစွဲဘဲစွန့်ထုတ်သောစနစ် သိသာစွာဓါတ်အားမသုံးစွဲဘဲစွန့်ထုတ်သောစနစ်ကစက်အတွက် အခြောက်ခံမှု ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အချိန်ကိုသက်သာစေသည်။ Farအနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးစက်များ လက္ခဏာရပ်များ။ ။အပူချိန် နည်းနည်းဖြင့် အခြောက်ခံသည့် ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး လျှင်မြန်စွာအခြောက်ခံနိုင်သည်။ ၁။ လောင်စာချွေတာပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲမှု နည်းပါးသည်။စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားပြီးအခြောက်ခံမှု ကုန်ကျစရိတ် လျှော့နည်းစေသည်။ ၂။ အရည်အသွေးမြင့် Far အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးအခြောက်ခံမှုကသီးနှံအရသာကိုပိုကောင်းစေသည်။ ဆူရှီထမင်းနှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောထမင်းချက်ရန်သင့်တော်သည်။ ၃။ တစ်ဦးချင်းသုံးစွဲသူများ၊ ပျိုးခင်းဌာနများနှင့် နေရာအခက်အခဲရှိသူများအတွက် နံပါတ်တစ် ရွေးချယ်မှု စံသတ်မှတ်ထားသောပစ္စည်းကိရိယာများ - စပါးအစိုဓါတ်အလိုအလျောက် တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ၊ လောင်းထည့်ရန်ခွက်၊ ဖုန်ခါစက်၊ လောင်စာတိုင်ကီ ရွေးချယ်စရာများ - မီးအားမလိုဘဲစွန့်ထုတ်သည့်နည်းလမ်း၊ မြေပြင်ညီလောင်းထည့်ရန်ခွက်/ စပါးခွံသိုလှောင်ကန်
အစားအသောက်များတွင် ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် မှိုပါဝင်မှုနှုန်းကို လျှော့ချရန် အတွက် Dryerအခြောက်ခံစက်များ ယနေ့ မြန်မာပြည်ရှိ အစားအသောက်အများစုတွင် မှိုများစွာ ပါဝင်လျှက်ရှိပြီး ၊ ထိုမှိုများသည် ကင်ဆာကိုဖြစ်စေပါသည်။ ထိုသို့မှိုများကိုဖြစ်စေသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ စိုထိုင်းစ များပါဝင်နေ၍ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆန်စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ပဲမျိုးစုံ ၊ ငါးခြောက် စသော အစားအသောက် ထုတ်လုပ်သော နေရာများတွင် နေပူလှမ်းခြင်းထက် Dryer အခြောက်ခံစက် ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် မှိုများကို လုံးဝကင်းစင်စေပါသည်။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် စက်ဖြစ်သည့် အတွက် အရေအသွေး အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ဖြစ်ပါသည်။ (မိမိလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်ရန် Model မျိုးစုံရှိပါသည်။) ထူးခြားချက်များ Farအနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးစက်များ။ ။ အပူဓါတ်သည် သီးနှံများထဲသို့ ထွင်းဖောက်ပြီးသီးနှံမျက်နှာပြင်နှင့် အတွင်းပိုင်းကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းခြောက်သွေ့စေနိုင်ပါသည်။ ဤစမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာကိုဂျပန်နိုင်ငံသီးနှံအဆင့်အတန်းအကဲဖြတ်ရေးအသင်းကြီးမှ ထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Far အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးစက်ကိုအသုံးပြုပြီးသီးနှံများအခြောက်ခံခြင်းသည် သဘာဝနေရောင်ခြည်သုံးအခြောက်ခံခြင်းနှင့် ထပ်တူနီးပါးတူညီပါသည်။ အပျက်အစီးမရှိသောအစိုဓါတ်တိုင်းတာသည့် ကိရိယာ ၁။ လျှပ်သို (Capacitance) အစိုဓါတ်တိုင်းတာသည့် ကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက် အစိုဓါတ်ပါဝင်မှု တိုင်းတာရာတွင် စပါးများမပျက်စီးနိုင်ပါ။ ၂။ သီးနှံနမူနာများဆက်တိုက်စီးဆင်းထုတ်လုပ်ပေးသည့်အတွက် အစိုဓါတ် တိုင်းတာရာတွင် တိကျသေချာပါသည်။  PLC ထိန်းချုပ်စနစ် (ရွေးချယ်စရာ) ၁။ PLC/GUI ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသည့် စနစ်ဖြင့် လွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ၂။ ပမာဏအများအပြားဝင်ဆန့်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းသုံးစံချိန်စံညွှန်း။ ၃။ အဝေးထိန်းကိရိယာဖြင့် စက်ကိုအလိုအလျောက် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ လက်ကျန် သန့်ရှင်းရေးစနစ် အခြောက်ခံမှု တစ်ကြိမ်နှင့် တစ်ကြိမ်အကြားစပါးများမကျန်ရှိစေရန် လက်ကျန် သန့်ရှင်းရေးစနစ်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ကျန်စပါးများကိုလွန်ကဲစွာအခြောက်ခံမိခြင်းသို့မဟုတ် မတူညီသောစပါးအမျိုးအစားများရောနှောကုန်ခြင်းတို့ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အကြမ်းခံသောစက်ဒီဇိုင်း လှည့်ပတ်စီးဆင်းပြီးအခြောက်ခံရာတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် လေမှုတ်စက်ကိုသုံးထားသောစပါးခြွေလှေ့စက် ပါဝင်သောကြောင့် အခြောက်ခံမှုလုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသည်နှင့် အမှိုက်သရိုက်များဖယ်ရှားပေးကာသန့်စင်သောစပါးများထွက်ရှိစေသည်။ သိသာစွာဓါတ်အားမသုံးစွဲဘဲစွန့်ထုတ်သောစနစ် သိသာစွာဓါတ်အားမသုံးစွဲဘဲစွန့်ထုတ်သောစနစ်ကစက်အတွက် အခြောက်ခံမှု ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အချိန်ကိုသက်သာစေသည်။ Farအနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးစက်များ လက္ခဏာရပ်များ။ ။ အပူချိန် နည်းနည်းဖြင့် အခြောက်ခံသည့် ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး လျှင်မြန်စွာအခြောက်ခံနိုင်သည်။ ၁။ လောင်စာချွေတာပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲမှု နည်းပါးသည်။ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားပြီးအခြောက်ခံမှု ကုန်ကျစရိတ် လျှော့နည်းစေသည်။ ၂။ အရည်အသွေးမြင့် Far အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးအခြောက်ခံမှုကသီးနှံအရသာကိုပိုကောင်းစေသည်။ ဆူရှီထမင်းနှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောထမင်းချက်ရန် သင့်တော်သည်။ ၃။ တစ်ဦးချင်းသုံးစွဲသူများ၊ ပျိုးခင်းဌာနများနှင့် နေရာအခက်အခဲရှိသူများအတွက် နံပါတ်တစ် ရွေးချယ်မှု။ အခြားသတ်မှတ်ချက်များ ဗို့အား - ၃ လိုင်း220V/380V
မြေထိုးစက် ( BULLDOZER )
Thai Plus ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် လယ်ယာ သုံးစက်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ကူဘိုတာ ရှေ့ ဘက်မြေထိုးစက်ကို လည်း လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ရောင်းချပေး လျက်ရှိပါသည်။မြေထိုးဓားသွားသည် အထူးသန်မာ၍ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ဆက် ရာမရှိတစ်ပြားတည်းဖြစ်သည်။လယ်ထွန်စက်နှင့် ခိုင်မြဲစွာ ဆက်ထားပြီး မကျိုးပဲနိုင်ပါ။ ထို့ အပြင် အမြင့်ကို မတင်နိုင်သော အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။မြေပြင်မှ ကောင်းစွာ ကင်းလွတ်သည့်အတွက် သွက်လက်စွာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် နိုင်ပါသည်။ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူပါသည်။ အနိမ့်အမြင့် အထိန်း မောင်းတံသည် စက်မောင်းသူ၏ အနီးတွင် ရှိသဖြင့် အချိန်ကာလ ကြာရှည်စွာ အလုပ်လုပ် ခြင်းကြောင့် မောပန်းနွမ်းနွယ်မှု့ ကို လျော့ကျစေပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်းမြေ ထိုးစက် ကိုဝယ်ယူလိုပါက Thai Plus ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။
အစားအသောက်များတွင် ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် မှိုပါဝင်မှုနှုန်းကို လျှော့ချရန် အတွက် Dryerအခြောက်ခံစက်များ ယနေ့ မြန်မာပြည်ရှိ အစားအသောက်အများစုတွင် မှိုများစွာ ပါဝင်လျှက်ရှိပြီး ၊ ထိုမှိုများသည် ကင်ဆာကိုဖြစ်စေပါသည်။ ထိုသို့မှိုများကိုဖြစ်စေသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ စိုထိုင်းစ များပါဝင်နေ၍ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆန်စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ပဲမျိုးစုံ ၊ ငါးခြောက် စသော အစားအသောက် ထုတ်လုပ်သော နေရာများတွင် နေပူလှမ်းခြင်းထက် Dryer အခြောက်ခံစက် ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် မှိုများကို လုံးဝကင်းစင်စေပါသည်။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် စက်ဖြစ်သည့်အတွက် အရေအသွေး အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ဖြစ်ပါသည်။ (မိမိလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်ရန် Model မျိုးစုံရှိပါသည်။) အထက်ပါ အခြောက်ခံသည့်စက်ကို ပတ်လည်သီးနှံအခြောက်ခံသည့်စက် (H200) ဟုခေါ်သည်။ ယင်းစက်သည် အပူချိန်နဲနဲဖြင့် လျင်မြန်စွာ အခြောက်ခံနိုင်သည်။ ညီညာနှံ့စပ်စွာ အခြောက်ခံပြီး၊ အရည်အသွေးမြင့် စပါးကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အရောင်းသွက် ကုန်စည်ဖြစ်စေရန် အကောင်းဆုံးပူးတွဲဆောင်ရွက်မည့်စက်ဖြစ်ပါသည်။ ဇီဝလောင်စာကိုအသုံးပြုသည့်အတွက် အခြောက်ခံမှုကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။ ထူးခြားချက်များ ၁။အပူချိန်နည်းနည်းဖြင့်အခြောက်ခံသည့်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးလျင်မြန်စွာအခြောက်ခံနိုင်သည်။ ၂။ညီညာနှံ့စပ်စွာအခြောက်ခံပြီး၊အရည်အသွေးမြင့်စပါးများကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ၃။ အရောင်းသွက် ကုန်စည်ဖြစ်ကာသင့်လုပ်ငန်းအတွက် အကောင်းဆုံးပူးတွဲဆောင်ရွက်မည့်စက် ဖြစ်သည်။ ၄။ သီးနှံအခြောက်ခံဌာနများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု။ ၅။ ဇီဝလောင်စာသုံးသိုလှောင်ကန်ကိုအသုံးပြုသည့်အတွက် အခြောက်ခံမှု ကုန်ကျစရိတ်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။ မှတ်ချက် သတ်မှတ်ချက်များသည် ကြိုတင်အသိမပေးဘဲအပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည် သတ်မှတ်ချက် လုပ်ငန်းစဉ် စွမ်းဆောင်ရည် - စပါး၊ ဂျုံအတွက် 680/M ၊ ပြောင်းအတွက် 745/M³ ပြင်ပလေထုအပူချိန်၊ လေထုအပူချိန်၊ နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ၊ ခြောက်သွေ့သောစပါးစသည်တို့ပေါ်မူတည်ကာခြောက်သွေ့ရန် အမှန်တကယ်ကြာချိန် ကွဲပြားခြားနားသည်။ အခြား သတ်မှတ်ချက်များ ဖြန့်ချိရေး - မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်/ဖြန့်ချိသူ (Golden Thurain Linn လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာနှင့် နည်းပညာ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်) လောင်စာ - ဒီဇယ်ဆီ သို့မဟုတ် ရေနံဆီ ဗို့အား - ၃ လိုင်း၊ 220V/ 380V စတင်စက်နှိုးခြင်း - လျှပ်စစ်ဖြင့် စတင်စက်နှိုးခြင်း စံသတ်မှတ်ထားသော ကိရိယာများ - *အဓိက ကိုယ်ထည် *အပူလှယ် ကိရိယာ *လက်ဖြင့် ထိတွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သော ထိန်းချုပ်စက် *ဖိအား ထိန်းညှိကိရိယာ ရွေးချယ်စရာ - အလိုအလျောက် အပူထိန်းကိရိယာ
အစားအသောက်များတွင် ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် မှိုပါဝင်မှုနှုန်းကို လျှော့ချရန် အတွက် Dryerအခြောက်ခံစက်များ ယနေ့ မြန်မာပြည်ရှိ အစားအသောက်အများစုတွင် မှိုများစွာ ပါဝင်လျှက်ရှိပြီး ၊ ထိုမှိုများသည် ကင်ဆာကိုဖြစ်စေပါသည်။ ထိုသို့မှိုများကိုဖြစ်စေသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ စိုထိုင်းစ များပါဝင်နေ၍ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆန်စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ပဲမျိုးစုံ ၊ ငါးခြောက် စသော အစားအသောက် ထုတ်လုပ်သော နေရာများတွင် နေပူလှမ်းခြင်းထက် Dryer အခြောက်ခံစက် ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် မှိုများကို လုံးဝကင်းစင်စေပါသည်။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် စက်ဖြစ်သည့်အတွက် အရေအသွေး အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ဖြစ်ပါသည်။ (မိမိလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်ရန် Model မျိုးစုံရှိပါသည်။) အထက်ပါ Indirect Series သည် မြင့်မားသောအပူထုတ်လွှတ်၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်သော အပူပေးစက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ Direct Series ( Biomass) ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အခြောက်ခံမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသောကြောင့်အသုံးပြုရန် အကျိုးရှိ၊ သင့်တော်သော စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများအခြောက်ခံမှုအတွက် စက်ပစ္စည်းမသုံးပဲ နေပူလှန်းခြင်းဖြင့် ဖုန်၊ မှုန်၊ သဲ၊ အမှိုက်သရိုက်၊ မှို များကပ်၍ပါရှိနိုင်သည်။ နေလှန်း၍အခြောက်ခံခြင်းအားဖြင့် စိုထိုင်းစ အပြည့်အဝ ကင်းစင်မှုကို မရှိနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ၄င်းအခြောက်ခံစက်ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့၏ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများတွင် စိုထိုင်းစကင်းစင်သည့်ပြီး ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည့် မှိုများကိုပါ အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးပြီးသား ဖြစ်ပါသောကြောင့် ကျန်းမာရေးကိုများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရေမြင့်မားသော အစားထိုးစွမ်းအင်စက်ပစ္စည်းဟုလဲ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ အလိုလျောက်အပူထိန်းကိရိယာ ပါရှိသောကြောင့် ဇီဝလောင်စာ တို့ကိုလဲ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ စက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သတ်၍ လုံခြုံရေးကိရိယာများ ထည့်သွင်းပေးထားသည့်အတွက် လွယ်ကူစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထူးခြားချက်များ ၁။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော အစားထိုး စွမ်းအင်ဖြစ်သောကြောင့် အခြောက်ခံမှု ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။ ၂။ မြင့်မားသော အပူထွက်ရှိမှုကြောင့် အခြောက်ခံစက် များစွာနှင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၃။ အပူထိန်း ပို့လွှတ်ကိရိယာ ရှစ်ခု၊ အပူထုတ်လွှတ်သော လေမှုတ်စက်ဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုအတွက် အချိုးကျ။ ၄။ သစ်သားစ၊ အုန်းဆံခွံ၊ စပါးခွံ၊ ကြံဖတ်၊ ပြောင်းဖူးရိုးတံ စသည်တို့ကို လောင်စာအဖြစ် သုံးနိုင်သည်။ အခြားသတ်မှတ်ချက်များ ဖြန့်ချိရေး - မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်/ဖြန့်ချိသူ (Golden Thurain Linn လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာနှင့် နည်းပညာ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်) စံသတ်မှတ်ထားသောကိရိယာများ - *အဓိကကိုယ်ထည် *အပူလှယ် ကိရိယာ *လက်ဖြင့် ထိတွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သောထိန်းချုပ်စက် *ဖိအားထိန်းညှိကိရိယာ*လှည့်ပတ်ကိရိယာ *လောင်စာအငွေ့ထုတ်ပန်ကာ *လက်ကျန် စပါးခွံစုဆောင်းသည့် တိုင်ကီ လုံခြုံရေး ကိရိယာများ - *သိုလှောင်ကန် အပူလွန်ကဲမှု သတိပေးသံ *စပါးခွံ တိုင်ကီ မီးဘေး သတိပေးသံ *လက်ကျန် စပါးခွံ စွန့်ပစ်မှု အဖွင့်အပိတ် *သိုလှောင်ကန် ဖိအား ထိန်းချုပ်ကိရိယာ *မော်တာ အပူ ဖြတ်တောက်ကိရိယာများ *လေဖိအားသုံး သန့်ရှင်းရေး နော်ဇယ်ခေါင်းများ *စစ်ဆေးရေး တံခါးပေါက်ပွင့်လျှင် သတိပေးသံ *ပြာများ ရှင်းလင်းရေး သတိပေးသံ *လေဖိအား သတိပေးသံ ဗို့အား- 220V/380V/415V/440V, 50Hz/60Hz(၃ လိုင်း)
အစားအသောက်များတွင် ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် မှိုပါဝင်မှုနှုန်းကို လျှော့ချရန် အတွက် Dryerအခြောက်ခံစက်များ ယနေ့ မြန်မာပြည်ရှိ အစားအသောက်အများစုတွင် မှိုများစွာ ပါဝင်လျှက်ရှိပြီး ၊ ထိုမှိုများသည် ကင်ဆာကိုဖြစ်စေပါသည်။ ထိုသို့မှိုများကိုဖြစ်စေသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ စိုထိုင်းစ များပါဝင်နေ၍ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆန်စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ပဲမျိုးစုံ ၊ ငါးခြောက် စသော အစားအသောက် ထုတ်လုပ်သော နေရာများတွင် နေပူလှမ်းခြင်းထက် Dryer အခြောက်ခံစက် ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် မှိုများကို လုံးဝကင်းစင်စေပါသည်။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် စက်ဖြစ်သည့်အတွက် အရေအသွေး အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ဖြစ်ပါသည်။ (မိမိလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်ရန် Model မျိုးစုံရှိပါသည်။) အဆိုပါစက်ပစ္စည်းကို ပတ်လည်သီးနှံအခြောက်ခံစက် (MS 18) ဟုခေါ်ပါသည်။ ၄င်းစက်ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် လောင်စာချွေတာပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲမှု နည်းပါသည်။ တုန်ခါမှုနှင့်အပူချိန်မြင့်တတ်မှု မဖြစ်စေရန် သီးခြားထိန်းချုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်လေဖိအားအဖွင့်အပိတ် လုံခြုံရေး၊ အလိုလျောက် ဖိအားမြင့်စတင်စက်နှိုးကိရိယာ၊ အချိန်သတ်မှတ်ကိရိယာ နှင့် အပူထိန်းကိရိယာ ပါရှိခြင်းတို့ကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အလွယ်တကူဖြုတ်တပ်နိုင်ကာ နေရာသိပ်မယူခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် အသုံးပြုရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့ပါသည်။ ထူးခြားချက်များ ၁။ လောင်စာချွေတာပြီးလျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲမှု နည်းပါးသည် ၂။ တုန်ခါမှုနှင့် အပူချိန်မြင့်တက်မှု မဖြစ်စေရန် သီးခြားထိန်းချုပ်စက်ဒီဇိုင်း ၃။ လေဖိအားအဖွင့်အပိတ် လုံခြုံရေးကိရိယာ ၄။ အလိုအလျောက် ဖိအားမြင့် စတင်စက်နှိုးကိရိယာ ၅။ အချိန်သတ်မှတ် ကိရိယာနှင့် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ၆။ အလွယ်တကူ ဖြုတ်တပ်နိုင်ကာနေရာသိပ်မယူခြင်း ၇။ အလူမီနီယမ် အလွိုင်းလေမှုတ်ဘလိတ်ပြား ဖြစ်သည့်အတွက်သံချေးမတက်ခြင်း၊ ဖုန်မတက်ခြင်း ၈။ အခြောက်ခံစက် စွမ်းဆောင်ရည် စမ်းသပ်မှုကိုတိုင်ဝမ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဓာတ်ခွဲခန်းကအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ အခြားသတ်မှတ်ချက်များ ဖြန့်ချိရေး - မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်/ဖြန့်ချိသူ (Golden Thurain Linn လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာနှင့် နည်းပညာ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်) စတင်စက်နှိုးမှု - အလိုအလျောက် စတင်စက်နှိုးမှု မြင်းကောင်ရေ - 1.5HP စက်အားထုတ်လွှတ်မှု - ခါးပတ်ကြိုးမောင်းနှင် အမျိုးအစား လုံခြုံရေး - လေဖိအားအဖွင့်အပိတ် ခလုတ် အခြောက်ခံနိုင်သည့်အမျိုးအစားများ ကြက်သွန်ဖြူ၊ မြေပဲ၊ ဆန်စပါး၊ နှံစားပြောင်း၊ ပြောင်းဖူး၊ နှင်းသီး
South West Tractor &amp; Turf is your local agricultural supplier, selling new and used farm machinery, as well as spare parts, and repairs on most makes and models of farm machinery. At South West Tractor &amp; Turf, we specialise in agricultural tractors, compact tractors, commercial and specialised turf and mowing equipment and four wheel drive diesel ATVs. We also carryalarge range of agricultural implements including discs, harrows, slashes, mulchers, grader blades, post-hole diggers and augers. South West Tractor &amp; Turf is home to leading brands including Massey Ferguson, Iseki tractors and mowers, Trimax mowers, Agrisem discs and seeding equipment, Jeantil manure spreaders and Tanco bale wrappers.
ကြံပင်ရိုးများနှင့်ပတ်လည်ခုတ်စက် TRA CHANG
Thai Plus ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် လယ်ယာ သုံးစက်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ကြံပင်ရိုးများနှင့်ပတ်လည်ခုတ်စက်ယာဉ်နှင့်လိုက်ဖက်သာ ဗျက်အကျယ်ရှိသည့်အတွက် ကြံခင်းမြောင်းများထဲတွင် အလုပ်လုပ်ရန်သင့်တော်သည်။ စပိန်နိုင်ငံမှ မှာယူတင်သွင်းသော ထွန်သွားများသည် အထူးသန်မာပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။အလေးချိန်ပေါ့ပါးပြီး မြေညက်အောင် ထွန်ယက်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် ဆီစားသက်သာသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်းစက် ကိုဝယ်ယူလိုပါက Thai Plus ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။
အစားအသောက်များတွင် ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် မှိုပါဝင်မှုနှုန်းကို လျှော့ချရန် အတွက် Dryerအခြောက်ခံစက်များ ယနေ့ မြန်မာပြည်ရှိ အစားအသောက်အများစုတွင် မှိုများစွာ ပါဝင်လျှက်ရှိပြီး ၊ ထိုမှိုများသည် ကင်ဆာကိုဖြစ်စေပါသည်။ ထိုသို့မှိုများကိုဖြစ်စေသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ စိုထိုင်းစ များပါဝင်နေ၍ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆန်စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ပဲမျိုးစုံ ၊ ငါးခြောက် စသော အစားအသောက် ထုတ်လုပ်သော နေရာများတွင် နေပူလှမ်းခြင်းထက် Dryer အခြောက်ခံစက် ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် မှိုများကို လုံးဝကင်းစင်စေပါသည်။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် စက်ဖြစ်သည့်အတွက် အရေအသွေး အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ဖြစ်ပါသည်။ (မိမိလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်ရန် Model မျိုးစုံရှိပါသည်။) ထူးခြားချက်များ ၁။အပူချိန်နည်းနည်းဖြင့်အခြောက်ခံသည့်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးလျင်မြန်စွာအခြောက်ခံနိုင်သည်။ ၂။ အရှေ့တောင်အာရှတွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တင်ပို့သည်။ ၃။ လောင်စာမလိုသည့်အတွက်အခြောက်ခံမှု ကုန်ကျစရိတ်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။ အခြားသတ်မှတ်ချက်များ ဖြန့်ချိရေး - မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်/ဖြန့်ချိသူ (Golden Thurain Linn လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာနှင့် နည်းပညာ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်) စတင်စက်နှိုးခြင်း - လျှပ်စစ်ဖြင့်စတင်စက်နှိုးခြင်း